“ရွှေမြန်မာ”: September 2009
၂၉ ရက် ၉ လ ၂၀၀၉ ရက်ကတော့ တကယ့်ကို မကြုံဖူးတဲ့နေ့ကို ကြုံဆုံလိုက်ရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မနေ့က အလုပ်က ပြန်တာလည်း နောက်ကျ၊ ကားကမရနဲ့ ရတဲ့ကားကို စီးတော့ ထိုင်ခုံမရှိဘူးတဲ့ ဒါနဲ့ လှိုင်သာယာပြန်မယ့် ၃၆ ယာဉ်လိုင်းကားကို တက်စီးမိတယ်။ အင်းစိန်ပြန်မှာဆိုတော့ မိုးတွေက အရမ်းရွာထားတော့ ကားက တစ်စီးမှ မရှိတာနဲ့တက်စီးလာခဲ့တာ ၇ နာရီ ၁၅ မိနစ်လောက်ရှိတော့ ပိတောက်ချောင်းမှတ်တိုင်နားရောက်နေပြီ။ ဒါနဲ့ ကားက ရှေ့ကို ဆက်သွားလို့မရတော့ဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲပေါ့ ကြည့်လိုက်တော့ ရှေ့တစ်လျှောက်လုံး ကားတန်းကြီးပိတ်နေတာ ၄ တန်းလောက်ရှိတယ်။ ဟိုဘက်က ပြန်တဲ့ကားလမ်းတောင် မရှိသလောက်ဖြစ်နေတယ်။ ဒါနဲ့ ကျွန်မ စီးလာတဲ့ကားက ကားတန်းကို ကျော်တက်လိုက်တာ ကားတန်းက ၅ တန်းဖြစ်သွားတယ်။ ကျော်တက်လာတုန်း လူတွေ လမ်းလျှောက်လာတာ တော်တော်များများတွေ့ရတယ်။ လှိုင်သာယာစက်မှုဇုံထိကားတန်းပိတ်နေတာ ညနေ ၄ နာရီထဲကတဲ့။ တချို့လူတွေက အဲဒီကနေ လမ်းလျှောက်လာရတာတဲ့။ ဟာ သွားပြီပေါ့။ ဒါနဲ့ ကားမောင်းတဲ့လူက ပတ်မောင်းမယ်တဲ့ တောင်ဥက္ကလာမှာလည်း ရေကြီးနေလို့ ပတ်မောင်းလာရတာ ခုလည်း ဒီလိုပဲဖြစ်နေပြီဆိုပြီ gus လောက်မလောက်ကြည့်ပြီး ပြန်ကွေ့ပတ်မောင်းတော့ ဘူတာရုံလမ်းထဲကို ပြန်ဝင်တယ် ဗဟိုလမ်းကနေသွားလို့ရမယ်ထင်တယ်ဆိုပြီး ၀င်ကာမှ ပိုဆိုးနေတယ် လမ်းထဲကားတွေရော လူတွေရော ပိတ်မိနေတယ်။ ဒါနဲ့ ဘယ်က ပြန်တက်လဲဆိုတော့ ရေကြောင်းမရောက်ခင် ရွာမကွေ့ကနေ ပြန်မောင်းတော့ လား လား ရှေ့ကို ဆက်မသွားဖို့ ၀ိုင်းပြောတဲ့သူတွေကြီးပဲ ကားလေးတွေဆို အကုန်မြှုပ်နေလို့ ရပ်တောင်ထားရတယ်။ အဲဒီဘက်မှာ တော်တော်ကြီးတယ်။ အနိမ့်ပိုင်းဆိုတော့ ဒါနဲ့ ကားသမားက သွားကြည့်မယ်လို့ ပြောပြီး စပယ်ယာကို ကားရှေ့က ဆင်းပြီး ရေတိမ်ကို လမ်းပြခိုင်းတယ်။ ဒါနဲ့ ဆက်သွားလိုက်တာ ဗဟိုလမ်းကနေ သမိုင်းကို ဖြတ်လို့ ဘယ်လိုမှ မရတာနဲ့ ပါရမီကနေ တက်တက် ပြန်ထွက်ပြီး မင်းဓမ္မလမ်းဘက်ကို မောင်းပြန်ရော... အဲဒီက ပိုဆိုးသေး နှစ်ထပ်အိမ်တွေဆို အောက်ထပ်က ဘယ်လိုမှ နေလို့မရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီ။ ကျွန်မလည်း ဘုရားစာရွတ် ပုတီးစိတ်နဲ့ လိုက်လာတာ။ နောက်တစ်နေရာရောက်တော့ အိမ်တွေကရော ဟိုဘက်က လမ်းလျှောက်လာတဲ့သူတွေကပါ ရှေ့ဆက်မသွားဖို့ တားကြတယ်။ အမျိုးသားတွေတောင် ခါးအထိ ရေရှိနေတာ အမျိုးသမီးတွေဆို သွားလို့မရဘူးတဲ့ ရေစီးနဲ့ပါသွားမယ်တဲ့။ ကားသမားက ရှေ့လည်းတိုးလို့မရ နောက်လည်း ဆုတ်လို့မရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီ ရှေ့ကို ဆက်သွားမှာပဲတဲ့ မရောက်ရောက်အောင် မောင်းမယ်ပေါ့။ ကားသမားရဲ့ စေတနာကို လေးစားမိတယ်။ တကယ်လို့သာ ကားပြန်မကွေ့ပဲ ပိတ်မိနေတဲ့နေရာကနေ စောင့်နေမယ်ဆို အိမ်ကို ပြန်ရောက်မှာ မဟုတ်သလို သူ့အတွက် ကျန်မယ့် gus ကိုလည်း သုံးပေးတဲ့အတွက်ရယ် နောက်တစ်ချက်က ကျွန်မ အမြင်မှာ ကားပေါ်မှာ ပါလာတဲ့လူတွေအားလုံးရဲ့ အသက်ဟာ သူ့လက်ထဲမှာပဲ ရှိနေပါလားလို့ စဉ်းစားမိလိုက်တယ်။ တကယ်လို့ အမျိုးသားတွေ ခါးလောက်ရှိတဲ့ ရေထဲမှာ ကားစက်သာ ထိုးရပ်သွားရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့အတွေးကို ကျွန်မ မ၀င်မိအောင် မနည်း အာရုံပြောင်းထားတယ်။ မင်းဓမ္မလမ်းဘက်က အိမ်ခြေက မရှိ ရေက ကြီးနဲ့ တကယ်ကို ဘယ်လိုမှ မတွေးဝံ့စရာအခြေအနေပါ။ ကျွန်မ တစ်သက်နဲ့တစ်ကိုယ် တစ်ခါမှ မကြုံဖူးတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကို မျက်ဝါးထင်ထင် ကြုံဆုံလိုက်ရတယ်။
ဒါနဲ့ လူတွေ တားနေတဲ့ကြားက ကားသမားက ရတယ် သူ မောင်းလို့ရအောင် ဖြည်းဖြည်းချင်းသွားမယ်တဲ့ ကားဘော်ဒီတောင် တစ်ဝက်မြှုပ်နေတာ မသွားဖို့ လမ်းက လူတွေက တားကြတယ်။ ဒါနဲ့ ကားသမားလည်း ဖြည်းဖြည်းချင်း ဘီးလိမ့်လိုက်တယ်။ ကားပေါ်မှာ ထိုင်ပြီး ရေပြင်ထဲမှာ သင်္ဘောနဲ့သွားနေသလို ခံစားမိတယ်။ အချိန်ကလည်း ည ၈ နာရီခွဲနေပြီ လမ်းကလည်း မှောင်မဲနေတာ လူခြေကလည်း တိတ်ဆိတ်နဲ့ ရေလှိုင်းသံပဲကြားနေရတယ် ကားပေါ်က လူတွေကလည်း ကြပ်ညှပ်နေတာပဲ ပါလာကြတာ ဒါပေမယ့် စကားပြောသံ ဆူညံသံတွေ မကြားရဘဲ နှလုံးခုန်သံတွေပဲ ကားတစ်စီးလုံးပြည့်နေသလိုပဲ။ ဒါနဲ့ ဘယ်ကို ပြန်တက်လဲဆိုတော့ ခ၀ဲခြံနားက အေးသိဒ္ဒိလမ်းကို ပြန်တက်မိသွားတယ်။ ကားပေါ်မှာ ပါလာတဲ့သူတွေရော ကားမောင်းသမားရော အောင်ပြီ အောင်ပြီလို့ ထအော်ကြတယ်။ ကျွန်မလည်း ခုမှ အသက်ရှူဖို့ သတိရမိသလို စိတ်လည်း နည်းနည်းအေးသွားတယ်။ အန္တရာယ်ကြားကနေ မောင်းပေးတဲ့ ကားသမားကြီးကိုလည်း ကျွန်မ ထိုင်ရှိခိုးချင်စိတ်ပေါက်မိတယ်။ ဒါနဲ့ အင်းစိန်ဂုံးကျော်တံတားက ဖြတ်မယ်ဆိုပြီး လာလိုက်တာ တံတားထိပ်လည်းရောက်ရော ကားကြောက တစ်ခါ ပိတ်မိနေပါရော...အဲဒါမှ ဒုက္ခပေါ့။ ကားသမားက ဒညင်းကုန်း ရွှေပြည်သာဘက်က ပတ်မောင်းမယ် gus ရှိသေးလားလို့ စပယ်ယာကို လှမ်းမေးတယ်။ ကျွန်မလည်း တံတားထိပ်ကနေပဲ လမ်းဆင်းလျှောက်မယ်ပေါ့။ နောက်တော့ gus မလောက်ဘူးဆိုတာနဲ့ ဒီကပဲ ဆက်မောင်းမယ်ဆိုတော့ ကျွန်မ လမ်းမှာဆင်းမယ်ပေါ့။ ဘာဖြစ်တာလဲမေးတော့ ကားချင်းတိုက်မိလို့ ရှေ့မှာတဲ့။ ဒါနဲ့ ကျွန်မလည်း ဆင်းပြီး ကားဂိတ်နှစ်ဂိတ်စာ လမ်းလျှောက်လာရတယ်။ လမ်းထိပ်ရောက်တော့ ဖေဖေက စောင့်နေတယ်။ ၉ နာရီခွဲလည်းရှိနေပြီ။ အိမ်ရောက်တော့ ဆူခံရပါလေရော... ဘယ်အချိန်ရှိနေပြီလဲတဲ့။ ကားကြောပိတ်လို့ပြောတာကို ဆင်းလျှောက်ပါလားတဲ့ ပိတောက်ချောင်းကနေ အင်းစိန်ကို ရေတွေထဲမှာ ဆင်းလျှောက်ရမယ်ဆို ခုချိန်ထိ ကျွန်မ ရှိနေဦးမလားဆိုတာကို စာဖတ်သူသာ ပြောကြည့်ပါတော့...
မနေ့က အဖြစ်အပျက်ကို ပြန်လည်ခံစားတင်ပြပါသည်။ ၃၆ လိုင်းက ကားနံပါတ်မမှတ်တဲ့ကားသမားကြီးကိုလည်း ဒီနေရာကနေ ကားပေါ်မှာ ခရီးသည်တစ်ဦးအနေနှင့် ခရီးသည်များ ကိုယ်စား ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။
ရေးသားသူ: yamin| အကြောင်းအရာ: မျှဝေခြင်း
ကိုလိုနီခေတ်က မြန်မာနိုင်ငံမှာ သုံးစွဲခဲ့တဲ့ ငွေစက္ကူတချို့ရဲ့ ပုံလေးတွေပါရှင်
ဒီနေ့ ဆေးရုံသွားပြမယ်ဆိုပြီး ညီမလေးတစ်ယောက်နဲ့အတူ ထွက်လာတာ ဆေးရုံက ပြင်ပလူနာဌာန ပိတ်တယ်ဆိုလို့ ငါးထပ်ကြီးဘုရားကို သွားရောက်ဖူးမြှော်ခဲ့ပါတယ်ရှင်...
ဘုရားဝင်းအတွင်းလည်း အေးချမ်းသာယာပြီး ဘုန်းကြီးကျောင်းကြီးကတော့ နှစ်ဟောင်းအတော်ကြာပြီး နာဂစ်နောက်ပိုင်း ဒီတိုင်းပဲ တွေ့မြင်ခဲ့ရတာ တော်တော်ဝမ်းနည်းဖို့ကောင်းပါတယ်။ ပြန်လည်ပြုပြင်မယ်ဆို နှစ်အတော်ကြာ တည်တံ့ခိုင်မြဲမယ်လို့ ကျွန်မ ယူဆမိပါတယ်။ ဒီနေ့တော့ ကံက အရမ်းကောင်းနေတာပဲ ဓာတ်ပုံတွေ အရိုက်ကောင်းလို့ မျက်မှန်တက်ထိုင်မိပြီး ကွဲတော့ မမြင်မစမ်းနဲ့ ဆေးခန်းပြေးပြီး မျက်မှန် ပြန်လုပ်ရတာ တွတ်ပီ ကံမကောင်းတဲ့ရက်ထဲက တစ်ရက်ဖြစ်ပြီး ဘုရားကို ကြည်ညိုစွာ ဖူးမြှော်ရတာဟာလည်း အဆိုးထဲက အကောင်းတစ်ခုလို့ ယူဆမိပါတော့တယ်။
ရေးသားသူ: yamin| အကြောင်းအရာ: ဘာသာရေး
ရွှေတိဂုံဘုရားကြီးရဲ့ သပ္ပာယ်လှသော ည
ရေးသားသူ: yamin| အကြောင်းအရာ: နည်းပညာ
ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးဆော့ဖ်ဝဲ Sources တစ်ခုလို့ဝင့်ကြွားထားတဲ့နေရာပါ။ ပြည့်စုံပေါများတဲ့ codding တွေနှင့် ရှိနေတဲ့နေရာပါ။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် သင်ကြားလေ့လာနိုင်တဲ့ code တွေ၊ program အသစ်တွေ၊ တစ်ပိုင်းတစ်စ လုပ်ထားတဲ့ project တွေနှင့် တော်တော်လေးအဆင်ပြေပါတယ်။ Programmers, designers, webmaster တွေအတွက် အကောင်းဆုံးနှင့် တန်ဖိုးအရှိဆုံး website ကောင်းလည်းတစ်ခုဆိုလည်း မမှားဘူးထင်ပါတယ်။ စမ်းသုံးကြည့်ပါလား။ ဖရီးရတယ်ဆို စမ်းသာ စမ်းကြည့် မမှားဘူး ဟီး...
မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာအသင်းချုပ် (MCF) မှ ကြီးမှူးပြီး မြန်မာနိုင်ငံ
ကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း (MCPA) နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ
ကွန်ပျူတာလုပ်ငန်းရှင်အသင်း (MCIA) တို့မှ ပူးပေါင်းကျင်းပမည့် Myanmar
ICT Exhibition Oct-2009 ကို ၂ဝဝ၉ ခုနစ် အောက်တိုဘာလ ၁၅ ရက်နေ့ မှ ၁၈ ရက်
နေ့ အထိ ရန်ကုန်မြို့၊ ဦးဝိစာရလမ်းရှိ တပ်မတော်ခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ရန်
မြန်မာနိုင်ငံ၏ အိုင်တီကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် အိုင်တီကဏ္ဍကို
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၊ မန်နေဂျာများ၊ ကျောင်းသား ကျောင်းသူများ ၊
လူငယ်များနှင့် ပြည်သူ လူထုတို့အား ကွန်ပျူတာပစ္စည်းများ၊ ကွန်ပျူတာဆက်စပ်
အပိုပစ္စည်းများ၊ နောက်ဆုံးပေါ် အီလက်ထရောနစ် ပစ္စည်းများ၊ ဆက်သွယ်ရေး
ကိရိယာများနှင့် ကွန်ပျူတာအသုံးချ ဆောဖ့်ဝဲ နည်းပညာများကို
တစ်နေရာတည်းတွင် ကြည့်ရှု လေ့လာနိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ Myanmar ICT Exhibition
Oct-2009 ကို စီစဉ်ပေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ရှာဖွေလိုသော လုပ်ငန်းလိပ်စာ Gtalk ကပါ ရှာဖွေပေးနိုင်ခြင်း
ရှာဖွေလိုသော လုပ်ငန်းလိပ်စာ အချက်အလက်များကို Web Site တစ်ခုတည်းသာ
မဟုတ်ဘဲ Gtalk ကပါ ရှာဖွေပေးနိုင်ခြင်း
Gtalk ကို Chatting အတွက်သာမက မိမိလုပ်ငန်းအတွက် အကျိုးရှိစွာ
သုံးစွဲနိုင်မယ့် အခွင့်အလမ်းကောင်းတစ်ခု ထွက်ပေါ်လာပါပြီ။
နောက်တစ်ချက်ကတော့ Gtalk သုံးစွဲဖို့ အကောင်းဆုံး
အကြောင်းပြချက်တစ်ခုအနေနဲ့လည်း အသုံးပြုလို့ ရပါတယ်။ အဲဒါ ဘာလဲဆိုတော့
အရင်တုန်းကလို အင်္ဂလိပ် - မြန်မာ ဘာသာပြန် ထည့်သလို၊
အိုင်တီနဲ့ပတ်သက်တာတွေ မေးမြန်းလို့ရတဲ့ အကောင့်လိုပဲ လုပ်ငန်းလိပ်စာတွေ
အတိအကျ လိုချင်သလို အလွယ်တကူ ရရှိနိုင်တဲ့ အကောင့်တွေကတော့
gtalk@themyanmardirectory.com နဲ့ mydirectory@bot.im ကို invite
လုပ်ထားရုံနဲ့ သိချင်တဲ့လိပ်စာတွေ အလွယ်တကူ ရန်ကုန်ဒိုင်ယာရီ စာအုပ်
မလိုပဲ သိရှိနိုင်တဲ့ အကောင့်လေးတွေပါ။ အင်ဗိုက်လုပ်တာ
ရေးသားသူ: yamin| အကြောင်းအရာ: ကဗျာ
သူ မရှိတဲ့ဘ၀ နေလို့မရ
ရေးသားသူ: yamin| အကြောင်းအရာ: နည်းပညာ, မျှဝေခြင်း
နေ့ရက် - ၂၀၀၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၂၇
ပထမအကြိမ် နှင့် ဒုတိယအကြိမ်ရှင်းလင်းပွဲ၏ အကြောင်းအရာများမှာ အတူတူပင်ဖြစ်သည်။
ဂျပန်နိုင်ငံရှိ Daiichi Computer
Resources (DCR) ကုမ္ပဏီလီမိတက် (၀န်ထမ်းဦးရေ ၁၄၀၀၊
၂၀၀၈ခုနှစ်အတွက်ရောင်းအား $128M) မှ ၁၄.၇.၂၀၀၈ တွင် ရန်ကုန်မြို့တွင်
ဂျပန်လူမျိုးပိုင် Myanmar DCR ကုမ္ပဏီလီမိတက်ကိုတည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။
ယခုလက်ရှိတွင် ဂျပန်လူမျိုးဝန်ထမ်း(၄)ဦး၊ မြန်မာလူမျိုးဝန်ထမ်း (၁၅၀)ဦး
System Development လုပ်ငန်းများကို မြန်မာနိုင်ငံတွင်
အခွင့်အရေးများလည်း ရရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။ ယခုရှင်းလင်းပွဲတွင် ရန်ကုန်ရှိ
ကျော်ကြားသောဂျပန်စာသင်ကျောင်းများဖြစ်သည့် Win Japanese Language
Schoollနှင့် Momiji Japanese Language
* Regular ၀န်ထမ်း (ယခုနှစ် Intern ၀န်ထမ်းမရွေးချယ်ပါ။)
- ITတွင်စိတ်ဝင်စားပြီး Programmer/System
Analyst/Consultant အဖြစ်အလုပ်လုပ်ကိုင်ချင်သော၊ ဂျပန်စာတွင် စိတ်ဝင်စား
(၂၀၁၀ခုနှစ်၊ ၄လပိုင်းတွင်ဘွဲ့ရရှိမည့်သူ၊ ကျောင်းပြီးမည့်သူ)
- ဆေးတက္ကသိုလ်မှကျောင်းသားကျောင်းသူများ (၂၀၁၀ခုနှစ်၊
- အခြားတက္ကသိုလ်များတွင် ပညာသင်ကြားနေသော
ကျောင်းသားကျောင်းသူများ (၂၀၁၀ခုနှစ်၊ ၄လပိုင်းတွင်ဘွဲ့ရရှိမည့်သူ၊
၂၀၁၀ခုနှစ် မတ်လ ၃၁ရက်နေ့တွင်
- တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူများ ၂၁ နှစ် (ယခုနှစ်
- Thesis ကျောင်းသားကျောင်းသူများ ၂၃ နှစ် (ယခုနှစ်
- ဆေးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူများ ၂၅ နှစ်
* Thesis ကျောင်းသားကျောင်းသူများအနေဖြင့် ၂၀၁၀ခုနှစ် မတ်လ ၃၁ရက်နေ့တွင်
** အထက်ပါကျောင်းသားကျောင်းသူများအနေဖြင့် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲတွင်
အင်္ဂလိပ်စာ၊ သင်္ချာ၊ သိပ္ပံတွဲများမှ အနည်းဆုံးဂုဏ်ထူး(၂)ခု
** ယခင်နှစ်များတွင် Myanmar DCR မှကျင်းပခဲ့သော
၀န်ထမ်းရွေးချယ်ပွဲများတွင် ၀င်ရောက်ဖြေဆိုဖူးခြင်း မရှိသောသူ ဖြစ်ရမည်။
- မှတ်ပုံတင်ကတ် မူရင်းနှင့်မိတ္တူ
(၀န်ထမ်းရွေးချယ်မှုတွင် အသက်အကန့်အသတ်ရှိပါသဖြင့် မပျက်မကွက်ယူဆောင်လာပါရန်)
Myanmar DCR Co., Ltd.
အခန်းအမှတ် (၄၀၈(B))၊ ယုဇနတာဝါ၊
ရွှေဂုံတိုင်၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့
စာရင်းလက်ခံချိန် ။ ။ ၉း၀၀ မှ ၁၁း၃၀ နာရီ
၁၃း၃၀ မှ ၁၆း၃၀ နာရီ
ကိုယ်ငေး ငေးကာ တမ်းတရင်း
ရေးသားသူ: yamin| အကြောင်းအရာ: ဘာသာရေး, မျှဝေခြင်း
အန္တရာယ်ကင်း ကြီးပွားဖြစ်ဖို့ ရွတ်ကြလေ
သမ္ဗုဒ္ဓေ ၊ အဋ္ဌဝီသဉ္စ
သဗ္ဗတေဇံ ၊ သဗ္ဗဂုဏံ
သဗ္ဗသုခံ ၊ လဘတုမေ
သဗ္ဗ သတ္တရု ၊ သဗ္ဗဘယံ
ဝိနာ သန္တု အသေသတော ။
လောကီလောကုတ် ချမ်းသာတိုးလို့ ပြည့်ဖြိုးစေဖို့ ရွတ်ကြလေ
ဒွါဝီသဉ္စ ၊ ဣမေဗုဒ္ဓါ
ဧကတိံသ ၊ သဗ္ဗေဗုဒ္ဓါ
ဒွတ္တိံသစ ၊ မဟာဗုဒ္ဓေါ
ပဉ္စဝီသာ ၊ ဗုဒ္ဓါနေတ္တိ
တေသံ ဓမ္မဉ္စ သံဃဉ္စ
နမက္ကာရာ နုဘာဝေန ဟိတွာ
သဗ္ဗေ ဥပ္ပဒ္ဒဝေ အနေက
ကျန်းမာ ချမ်းသာ ကျက်သရေတိုးဖို့ ရွတ်ကြလေ
သမ္ဗုဒ္ဓေ ၊ အဋ္ဌ၀ီသဉ္စ
ဒွါဒသဉ္စ ၊ သဟဿကေ
ပဉ္စဿတ ၊ သဟဿနိ
နမာမိ ၊ သိရသာမဟံ
အပ္ပကာ ၊ ၀ါဠုကာ ဂင်္ဂါ
အနန္တာ ၊ နိဗ္ဗုတာ ဇိနာ
တေသံ ၊ ဓမ္မဉ္စ သံဃဉ္စ
အာဒရေန ၊ နမာမဟံ
နမက္ကာရာ ၊ နုဘာဝေန
ဟိတွာ ၊ သဗ္ဗေ ဥပ္ပဒ္ဒဝေ
အနေက ၊ အန္တရာယာပိ
၀ိနဿန္တု ၊ အသေသတော။
ရန်တုံ့ကင်းဝေး ၊ ချစ်ခြင်း ၊ စန်း ၊ လာဘ် ၊ ဖြိုးဝေဖို့ ရွတ်ကြလေ
ပဉ္စဿတ ၊ သဟသာနိ
ဂင်္ဂါယံ ဝါဋ္ဌုကာ ၊ သုဏ္ဏေ
ပရာဇိတာ ၊ မဟာပုလ္လေ
တေသံ ၊ ဓမ္မဉ္စ ၊ သံဃဉ္စ
နမက္ကာရာ ၊ နုဘာဝေန
ဟိတွာ ၊ သဗ္ဗေ ဥပ္ပဒ္ဒေဝေ
အနေက အန္တရာ ယာပိ
ဝိနာဿတု အသေသတော ။
နတ်ချစ် လူချစ် စီးပွားဖြစ်ဖို့ ရွတ်ကြလေ
သမ္ဗုဒ္ဓေ ၊ အဋ္ဌဝီသသိ
မမ ဂစ္ဆတိ ၊ ပုရတော
ပဉ္စဗုဒ္ဓါ ၊ မဟာတေဇော
မမသီသေနိ ၊ သေသတိ
ဒိဗ္ဗတီတံ ၊ မာရက္ခ န္တု
နမဿမိ ၊ ဂုဏေ
အာပတ္တိပုဂ္ဂလေ ၊ အရိယာနဉ္စ သဗ္ဗသံ
(စိမ်းမြသီတာ သီလရှင်ပရဟိတ စာသင်တိုက်)
ကျွန်မ ဒီခေါင်းစဉ်လေးကို ဘာလို့ ပေးသလဲဆိုတော့ အဘွားရှိစဉ် ကျွန်မငယ်ငယ်ကလေးကတည်းက ပြောဆိုခဲ့ဖူးတဲ့စကားလေးတစ်ခွန်းလေးကြောင့်ပါပဲ။
သမီး လူရယ်လို ဖြစ်လာရင် နေ့စဉ် ကောင်းမှုတစ်ခုခုကို လုပ်ရမယ်တဲ့။ လူတိုင်း လောဘ မောဟတွေနဲ့ မကင်းရပါဘူး။ ဒါကြောင့် အဘွားက အများကြီး မလုပ်ခိုင်းပဲနဲ့ သေးသေးမွှားမွှားကနေ ကြီးကြီးမားမားထိအောင် နေ့စဉ် ကောင်းမှုတစ်ခုတော့ လုပ်ပါလို့ သွန်သင်ဆုံးမခဲ့ပါတယ်။ အဘွားမရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်းလည်း အဘွားရှိစဉ်ကဲ့သို့ သမီး ကောင်းမှုတွေ ဆက်တိုက်လုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ခုလည်း ဒီကနေ့က တနင်္ဂနွေနေ့ဆိုတော့ အများသူငှာ နားရက်ဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ ကျွန်မအတွက်တော့ မွေးဖွားခဲ့ပြီးချိန်ကနေ ဒီကနေ့ထိ နားရက်ဆိုတာ တစ်ခါဖူးမှ မရှိခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မ နေပျော်တယ်။ ဒီနေ့ဆို ပိုပြီး ကြည်နူးဝမ်းသာစိတ်ဖြစ်မိတယ်ဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ ကျွန်မရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်၊ ဖြည့်ဆည်းချင်တဲ့စိတ် နောက်တစ်ချက်က ပရဟိတအလုပ်တွေကို နာဂစ်ပြီး နောက်ပိုင်း အတော်များများ လုပ်ခဲ့မိပါတယ်။ ခု ဒီနေ့က ကျွန်မ ဆိုက်တွေလည်ပြီး စာဖတ်ရင်းနဲ့ ဆိုက်တစ်ဆိုက်ကို ရောက်ခဲ့ခြင်းကနေ စခဲ့တယ်ဆိုရမှာပေါ့။
ဆိုက်နာမည်က http://myanmaractivecaringfamily.ning.com ဆိုတဲ့ ဆိုက်လေးတစ်ခုပါ။ လူငယ်တွေ သူတို့ရဲ့ မအားလပ်တဲ့အချိန်၊ နောက်ပြီး လုပ်ခ လုပ်စာလေးတွေနဲ့ တည်ဆောက်ထားတဲ့ ပရဟိတလုပ်ငန်းလေးတစ်ခုပေါ့။ ကျွန်မ ရင်ထဲမှာ ဖော်မပြတတ်အောင် ၀မ်းသာမိပါတယ်။ ကျွန်မက ကိုယ်သာ ငတ်ရင် ငတ်ပါစေ၊ သူများ ကူညီနေရရင် ကျေနပ်တတ်တဲ့သူဆိုတော့ စိတ်ပါဝင်စားစွာ ရောက်သွားခဲ့တယ်။ ဒါနဲ့ ဆိုက်ကနေ ကျွန်မကို မေးလ်ပို့လာပါတယ်။ ဘယ်နေ့ဘယ်ရက်ကို အလှူအတန်းအတွက် တိုင်ပင်ကြမယ်လို့ ရေးထားပြီး လှူမယ့် ကျောင်းကိုလည်း ရှင်းပြပါတယ်။ ၄ ကြိမ်မြောက် ပရဟိတမှာ ကျွန်မ ပါဝင်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။
စတုတ္ထအကြိမ်မြောက် ကူညီထောက်ပံ့လှူဒါန်းရန် ရည်ရွယ်ထားသည့် စမ်းမြသီတာ သီလရှင်စာသင်တိုက် နှင့် ပတ်သက်ပြီး တင်ပြခြင်း။ စမ်းမြသီတာ သီလရှင်စာသင်တိုက် (သီလရှင်ဆရာလေးနှင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးနေသော ကလေးသူငယ်များ ပညာသင်ကြားလျက်ရှိသော ပရဟိတကျောင်း) ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါကျောင်းတွင် အမိမဲ့၊ အဖမဲ့ ခိုကိုးရာမဲ့ ကျောင်းသား/သူကလေးများ၊ ရပ်ကွက်ကျေးရွာ အသီးသီးမှ ဆင်းရဲနွမ်းပါး ပညာမသင်ကြားနိုင်သူများကို တိုက်အုပ်-သီလရှင်ဆရာလေးက မိမိ၏ ရင်နှစ်သီးခြာ သား/သမီးများကဲ့သို့ ပြုစုစောင့်ရှောက် အခမဲ့ ပညာသင် ကြားပေးလျှက် ရှိပါတယ်။ ကျောင်းသား/သူများ လက်ခံရာတွင် (၃)မျိုး လက်ခံပါတယ်။ အတိုကောက်အနေနဲ့ (စုံ၊ပဲ့၊မဲ့)လို့ သတ်မှတ်ထားကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
မိဘစုံလင်ပေမယ့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးနေတဲ့ ကလေးသူငယ်တွေ၊ မိဘနှစ်ဦးမှာ တစ်ဦးဦးပဲ့နေတဲ့ ကလေးသူငယ်တွေနဲ့ မိဘလုံးဝမဲ့နေတဲ့ ကလေးသူငယ်တွေ အားလုံးကို ပညာ သင်ကြားပေးလျက်ရှိပြီး၊ ထိုက်သင့်သလောက် ကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်ပေးနေတဲ့ ကျောင်းတစ်ကျောင်းဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း လေ့လာသိရှိခဲ့ရပါတယ်။ လက်ရှိအခြေအနေမှာတော့ ကလေးသူငယ် စုစုပေါင်း (၁၁၀)ယောက်ကို စာသင်ကြားပေးနေပြီး ကျောင်းမှာ သီလရှင်နဲ့ မိဘမဲ့ကလေး အရေအတွက် (၆၂) ယောက် နေထိုင်ပါတယ်။ သူငယ်တန်းကနေ ဒသမတန်းအထိ ပြုစုစောင့်ရှောက် အခမဲ့ ပညာသင်ကြားပေးလျှက် ရှိပါတယ်။ အတန်းတင်စာမေးပွဲ ဖြေဆိုရာမှာတော့ မူလတန်းကလေးများကိုတော့ ကျောင်းတွင်းမှာပဲ ဖြေဆိုခွင့် ပြုထားပြီး အလယ်တန်းနှင့် အထက်တန်း ကလေးများကို ဘ/က ကျောင်းတွေမှာ သွားရောက်ပြီးတော့ ဖြေဆို ရပါတယ်လို့ သိရှိခဲ့ရပါတယ်။ ဒီကျောင်းလေးက ကားလမ်းမနဲ့ တော်တော်လေး အလှမ်းဝေးတဲ့ ကျောင်းလေးတစ်ကျောင်းပါ။
စာနာထောက် ထားမှုနဲ့ လူမှုဘ၀ဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်မှုကို လိုလားနေတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ လှူချင်တယ်၊ ထောက်ပံ့ချင်တယ် ဆိုရင်တော့ လှူသင့်၊ ထောက်ပံ့သင့်တဲ့ ကျောင်းလေးတစ်ကျောင်းဖြစ်ပါတယ်။ နေ့စဉ် စာသင်ကြားနေတဲ့ ကလေးသူငယ်တွေရဲ့ ပညာသင်ကြားမှုစရိတ်၊ ကျွေးမွေးမှုစရိတ်နဲ့ လူတန်းစေ့ ၀တ်-စားနိုင်ရေးအတွက် စရိတ်တွေက မသိသာပေမယ့် မလွယ်ကူလှတဲ့ စရိတ်တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အလှူငွေ သိပ်မရှိတဲ့ ကျောင်းဖြစ်သလို ရတဲ့အလှူငွေတွေနဲ့ လုံလောက်အောင် အသုံးပြုလုပ်ဆောင်နေသော ကျောင်းတစ်ကျောင်းဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ လက်ရှိမှာ အလိုအပ်ဆုံးဖြစ်နေတဲ့ အရာတွေကတော့ ပုံနှိပ်စာအုပ် (တတိယတန်း-သိပန်)၊ ဗလာစာအုပ်၊ ခဲတံ၊ ဘောပင်နှင့် အခြားအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ၊ စားသောက်ကုန်ကြမ်းများနှင့် အလှူငွေများ လိုအပ်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ M.A.C.Family ပရဟိတလူငယ်အဖွဲ့မှ ၂၀၀၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ၊ ၁၃ ရက် နေ့မှာတော့ ဒီကျောင်းလေးကို ကူညီထောက်ပံ့လှူဒါန်း သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးသူငယ်များအတွက် စား-၀တ်နေရေး၊ ပညာသင်ကြားရေး၊ ကျန်းမာရေးကိစ္စရပ်များ၊ အခြားလိုအပ်သော အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများနှင့် အလှူငွေများ လှူဒါန်းလိုပါက မသွားမီ လာရောက်လှူဒါန်းနိုင်ပါတယ်။ လိုအပ်တဲ့ထောင့် တစ်နေရာကနေ တတ်နိုင်သလောက် ပါဝင်လှူဒါန်းနိုင်ပါကြောင်း လေးစားစွာဖြင့် နှိုးဆော် ဖိတ်ကြားအပ်ပါတယ်။
M.A.C.Family ပရဟိတလူငယ်အဖွဲ့ရဲ့ စတုတ္ထအကြိမ်မြောက် ကူညီထောက်ပံ့လှူဒါန်းမှုလေးမှာ မိဘမဲ့ကလေး သူငယ်များကို ကြင်နာသနားစိတ် ထားရှိခြင်းဖြင့် အနယ်နယ် အရပ်ရပ်က စေတနာရှင် ကုသိုလ်ရှင်များကို မင်္ဂလာဖြင့် ကြိုဆိုပါတယ်တဲ့။
စမ်းမြသီတာ သီလရှင်စာသင်တိုက်အား ကူညီထောက်ပံ့လှူဒါန်းနိုင်မည့် လှူဖွယ်ပစ္စည်းများ နှင့် လိုအပ်ချက်များ တင်ပြခြင်း။
ပုံနှိပ်စာအုပ် (တတိယတန်း - သိပ္ပံ)၊
ဗလာစာအုပ်၊ ဘောလ်ပင်၊ ခဲတံ၊ ခဲဖျက် . . . အစရှိသော စာရေးကိရိယာပစ္စည်းများ၊
ပဲကြာဇံ . . .
ဗဟုသုတ စာစာပေများကိုလည်း စေတနာရှင် ကုသိုလ် ရှင်များ အနေဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားပြီး လှူဒါန်းလိုပါက M.A.C.Family ပရဟိတလူငယ်အဖွဲ့သို့ ဆက်သွယ် ပါဝင် ကူညီထောက်ပံ့လှူဒါန်း ဆောင်ရွက်ကြဖို့ ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ် . . . . ။
မနက် ၈ နာရီအရောက် အသင်းတည်ရှိရာနေရာကို လာရပါမယ်တဲ့ အသင်းကနေ ၈ နာရီခွဲ ကားထွက်မယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ကျွန်မက စိတ်ဝင်စားပြီး ကုသိုလ်လိုချင်တဲ့သူများကို ပြောတော့ စိတ်ပါဝင်စားစွာ လိုက်မယ်လို့ ပြောတဲ့အတွက် ကျွန်မရဲ့ ကုသိုလ်တွေကို မျှဝေပေးရလို့ ပီတီဖြစ်မိပြန်ပါတယ်။
ဒီနေ့မနက် အစောကြီး ၁၀ မိုင်ဈေးရှေ့ကနေ စောင့်နေလိုက်တာ လာခေါ်တဲ့ကားက ၁၀ နာရီဝန်းကျင်မှ ရောက်လာတယ်။ ဒါနဲ့ ၈ မိုင်မှာ တစ်ယောက်ခေါ်မယ်ဆိုပြီး ပြန်တက်သွားတယ်။ ဒါနဲ့ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ် ပုလဲမြို့သစ်ကို ဆက်မောင်းတယ်။ လမ်းကတော့ ကောင်းလိုက် မကောင်းလိုက်ပဲ။ နာရီဝက်လောက်ကြာတော့ ပုလဲမြို့သစ်မှာရှိတဲ့ စိမ်းမြသီတာ သီလရှင်ကျောင်းကို ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါနဲ့ ဆရာလေးတွေ ဆွမ်းစားမှီဖို့အတွက် မနားတော့ပဲ ဆွမ်းအတွက် ပြင်ဆင်ရပါတယ်။ ယောက်ျားလေးတွေကတော့ ကလေးကျန်းမာရေးအတွက် လက်သည်း ခြေသည်း ရှင်းလင်းပေးပြီး ကျန်းမာရေးအတွက် နားလည်အောင် ရှင်းပြကြပါတယ်။ ဒါနဲ့ အားလုံး တစုတဝေးတည်း လုပ်လိုက်တာ ခဏကြာတော့ ပွဲတွေအားလုံးပြင်ပြီးတော့ ဆရာလေးတွေ အားလုံးကို ကပ်ကြပါတယ်။ ဆရာလေးတွေ အားလုံး ၃၉ ပါး ရှိပါတယ်။ ဆရာလေး လူကြီးတွေက ၃
ပါးပဲ တွေ့ရပြီး ကျန်တာက မယ်သီလရှင် ကလေးတွေပဲ များပါတယ်။ ဆွမ်းကပ်ပြီးတော့ ကျောင်းက ကလေးတွေ စာသင်ပေးတဲ့ဆရာမတွေနဲ့ ဧည့်သည်တွေကို ကျွေးပြီးမှ ကျွန်မတို့အဖွဲ့က တစ်စုတစ်စည်းတည်း ပျော်ပျော်ပါးပါးစားကြပါတယ်။ စားပြီးတော့ ခဏနေပြီးတော့ ကလေးတွေနဲ့ စိတ်ဓာတ်မြင့်ဖို့အတွက်ရယ်၊ ပျော်ရွှင်မှုတွေ မျှဝေချင်တာရယ်ကြောင့် ကလေး အယောက် ၉၀ ကို အဖွဲ့ ၅ ဖွဲ့ခွဲပြီး လူခွဲလိုက်တယ်။
ရယ်ရသေးတယ်။ ကျွန်မပါတဲ့အဖွဲ့က ခေါ်လာတဲ့ကလေးတွေက ကလေးသေးသေးလေးတွေ နောက်ပြီးတော့ မိန်းကလေးတွေကြီးပဲ တချို့က
ရွေးခေါ်တယ်ပေါ့။ သွားခေါ်တဲ့ ညီမလေးကို ဘာလို့ ရွေးမခေါ်လာတာလဲလို့ ပြောတော့ မမကလည်း သူတို့က သမီးကို အကုန်ဝိုင်းဆွဲကြတာတဲ့။ ဒါနဲ့ ကလေးတွေကို နိုင်အောင် ကစားရမယ်နော် နိုင်တဲ့သူ ဆုချမယ်ပြောတော့ သူတို့ နိုင်အောင် ကစားမယ်တဲ့ လက်သီးလက်မောင်းတန်းလို့ ကလေးတွေက တော်တော်ငယ်သေးတယ်။ အဖြူအစိမ်းလေးတွေသာ ၀တ်ထားကြတာ ကောင်းကောင်းကန်းကန်းတော့မဟုတ်ဘူး။ အင်္ကျီအနွမ်းလေးတွေနဲ့လေ။ ဒါနဲ့ တော်သလင်းနေ ပုစွန်သေဆိုတဲ့အတိုင်း နေပူလိုက်တာလည်း ကျဲကျဲတောက်ပဲ သီလရှင်လေးတွေလည်း ကတုံးလေးတွေမှာ ချွေးတရွှဲရွှဲနဲ့ မမောနိုင် မပန်းနိုင် ဆော့ကစားနေလိုက်ကြတာ။ ကျန်တဲ့အဖွဲ့တွေက ခဏနေတော့ သူတို့ ဆော့ပြီးရင် စားဖို့
ရွှေရင်အေးတွေကို အဆင်သင့် ပြင်ထားပြီး ၂ နာရီခွဲတော့ ဆော့တာ ရပ်ပြီး လက်ဆေးခိုင်းရပါတယ်။ နောက်တော့ ရွှေရင်အေးသောက်ဖို့
နေရာချပြီးနောက် အားလုံးကို ပေးဖို့ ဗလာစာအုပ်၊ ခဲတံ၊ ခဲဖျက်၊ မုန့်တွေ၊ သကြားလုံးတွေကို တန်းစီးပြီး ဝေငှလိုက်ပါတယ်။
သီလရှင်လေးတစ်ပါးက အတင်းလာဆွဲတယ်။ ပြီးတော့ ဆရာမ ရော့ စားတဲ့။ သူကို ပေးတဲ့ဝေစုကို လာပေးတယ်။ မစားပါဘူး ဆရာလေး စားပါလို့ပြောတော့ မစားဘူးတဲ့ အတင်းလက်ထဲထည့်ပြီး ထွက်ပြေးသွားတယ်။ ဒါနဲ့ အနားမှာ ရှိတဲ့ တခြားကလေးတွေကို ပြန်ဝေငှလိုက်တော့
သူက ဆရာမကို စားစေချင်လို့ ကျွေးတာပါ။ ရော့ သကြားလုံးတွေစားတဲ့ လာထည့်ပြန်ရော။ ထပ်ပြီး ပြောရတယ် စားပါလို့ ပြောတော့ ပြန်ရင်
လိုက်ချင်တယ်တဲ့။ စိတ်ထဲမကောင်းပါဘူး။ ပျော်အောင် နေလို့ စာကြိုးစားလို့ ပြောတော့ မျက်ရည်လေး ကလယ်ကလယ်နဲ့ နောက်လည်း လာလည်ပါနော်တဲ့။ ဒါနဲ့ ခဏနေတော့ လှူဖွယ်ပစ္စည်းအတွက် ရေစက်ချအမျှဝေဖို့ ဓမ္မရက္ခိတ ဓမ္မာရုံမှာ လူပြန်စုပြီး ဆရာတော်ရဲ့ တရားကို နာကြားကြပါတယ်။ ဆရာတော်က တရားဟောရင်း ပြောပါတယ်။ ဗုဒ္ဒမြတ်စွာဘုရားရဲ့ ဆုံးမစကားဟာ လုပ်သင့် လုပ်ထိုက် မှန်ကန်လား မမှန်ကန်ဘူးလား မေးပြီး တရားတော်နဲ့အညီ ပြုမူနေထိုင်သွားရင် လူတိုင်း တိုးတက်အောင်မြင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေပါ နောက်ပြီး ဒီလိုသာ လူကြီးလူငယ်တွေက ထောက်ပံ့ကြမယ်ဆိုရင် စာမတတ်သူ ပပျောက်ရေးဆိုတာလည်း တကယ့်လက်တွေ့မှာ
အကောင်အထည်ပေါ်လာတော့မှာလို့ ယုံကြည်မိတဲ့အကြောင်းနဲ့ ဆရာတော်က နယ်လှည့်သာသနာပြု ပရဟိတလုပ်နေတဲ့
ဆရာတော်တစ်ပါးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူက ခု ငါးဆယ်ကျော်ပြီတဲ့ ကလေးတွေနဲ့ ကျွန်မတို့အဖွဲ့ဟာ ပျော်ရွှင်မြူးတူးစွာ ဆော့ကစားနေကြတာ
တကယ့်မောင်ရင်းနှမအတိုင်းပဲ မြင်ရတာ ကြည်နူးတယ်တဲ့ သူတောင် အသက် ပြန်ငယ်လိ်ု့ရရင် ပြန်ငယ်ချင်သေးတယ်လို့ ပြောရှာပါတယ်။ ဒါနဲ့
ရေစက်ချ ပြန်ဖို့ ပြင်ကြဆင်ကြနဲ့ ၃ နာရီ ၄၅ မိနစ်မှာ ပြန်လည်ထွက်ခွာလာခဲ့ပါတယ်။ သူတို့တွေရဲ့ ကြေကွဲတဲ့အကြည့် ခဏတာ ပျော်ရွှင်မှုဟာ အိပ်မက်ပုံစံမျိုး ဖြစ်မှာ အရမ်းကြောက်မိပါတယ်။ သူတို့လေးတွေ အမြဲပြုံးပျော်ရွှင်ပြီး ပညာတတ်တွေ အနာဂတ်ရဲ့သားကောင်းဇာနည်တွေ ဖြစ်စေချင်မိတာ ကျွန်မ မလွန်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့အဖွဲ့ရဲ့ ပြုပြုသမျှ ကုသိုလ်အဖို့ဖို့ကို သင်လည်း ရစေဖို့ ထပ်မံ မေတ္တာပို့ အမျှအတမ်း ဝေလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်မရဲ့ တစ်နေ့တာ အလုပ်က အကျိုးရှိလား မရှိဘူးလား စာဖတ်သူ ပြောပြသွားပါဦးနော်။
ရင်ထဲက ထွက်ကျလာတဲ့စကားစုလေးတစ်စုကို ကဗျာအဖြစ် သွန်းလောင်းခဲ့မိပါတယ်။
သင်လည်း သာဓုခေါ်နိုင်စေ...။ ။
တတ်နိုင်သလောက် လက်တစ်ဖက်ကမ်းရင်း မိဘမဲ့များအတွက် ရှင်သန်ရပ်တည် ပြုပြုသမျှကောင်းမှု အစုစုကို ပြန်လည် မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
ဖြစ်ခြင်း ပျက်ခြင်း မတည်မြဲ
တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဘလောဂ်ဂါတွေရဲ့ ကိုယ်စား
ကိုယ်တို့မြေရဲ့ တာဝန်ကျေ ဘလောဂ်ဂါများကို